Autoplay ကိုပြင်ပြီးတော့virus ရန်ကိုကြိုတင်ကာကွယ်ကြရအောင် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Computers & Technology » Autoplay ကိုပြင်ပြီးတော့virus ရန်ကိုကြိုတင်ကာကွယ်ကြရအောင်
Autoplay ကိုပြင်ပြီးတော့virus ရန်ကိုကြိုတင်ကာကွယ်ကြရအောင်
Posted by sithuphyo on May 29, 2010 in Computers & Technology, Know-How, DIY | 8 comments
ယခုကျနော်တင်ပြမယ့်ပိုစ့်လေးကတော့autoplay function ကိုဘယ်လိုပိတ်ရမလဲဆိုတာကိုတင်လိုက်ပါတယ်။autoplay function ကိုမပိတ်ထားရင်တော့ကျနော်တို့ရဲ့ computer မှာvirus ၀င်ဖို့လမ်းစပေးနေသလိုဖြစ်နေတာပေါ့။အခုဘဲကျနော်တို့ရဲ့ကွန်ပြူတာမှာautoplay function ပိတ်ကြရအောင်။ Start–>Run –>regedit ရိုက်ထည့်ပြီးဖွင့်ပါ.. Regedit ပေါ်လာပါမည် ..
HKEY_LOCAL_MACHINE –>System–>CurrentControlSet–>Service –>Cdrom ကိုရွေးပါ။ညာဘက်တွင် AutoRun အမည်ကိုရှာပါ.. double click နှိပ်ပါ။EditDWORD Value ၏ value data ကို 0ဟုပေးလိုက်ပါ။ AutoRun ကိုမတွေ့ဘူးဆိုလျှင်ကျနော်တို့setting တွေအနည်းငယ်ပြင်ပေးရပါမယ်။ menu bar က Edit–>New–>DWORDValue ကိုဖွင့်ပါ.. Registry Editor ညာဘက် boxတွင် regisrty value (New Value#1) တစ်ခုပေါ်လာပါမည်။၎င်းတွင်autorun ဟုရိုက်ထည့်လိုက်ပါ။double -click ပေပြီးeditDWORD Value ကို0ပေးလိုက်ပါ။1ဆိုတာကတော့enable ပါ။0ကတော့disable ပါ။ဒါကတော့autorun ကိုregistry ကနေပိတ်တာပါ။နောက်ပြီးတော့ group policy ထဲကနေပိတ်နည်းကိုတင်ပြပါမယ်။ group policy ကိုသွားဖို့ရန်အတွက် ကျနော်တို့run ထဲကနေ gpedit.msc ဆိုပြီးတော့ရိုက်လိုက်ပါ။ ပြီးရင် computer config နဲ့user config ဆိုပြိးတွေ့ရမှာပါ။computer config ကိုသွားလိုက်ပါ။software setting,windows settings နဲ့ administrative template ဆိုပြီး၃ခုတွေ့ရမှာပါ။ administrative template ကိုသွားပါ။ပြီးရင်system ကိုသွားလိုက်ပါ။အဲဒီမှာ turn off autoplay ကိုရှာပါ။တွေ့ရင်တော့double-click ပြီးenable လုပ်လိုက်ပါ။ ပြီးရင်ကျနော်တို့ user config မှာလုပ်ဖို့ကျန်သေး
ပါတယ်။ အပေါ်ကိုပြန်တက်ပါ။user config ကိုဖွင့်ပြီးadministrative template ကိုဖွင့်လိုက်ပြီးsystem ကိုဖွင့်။ပြီးရင်တော့အပေါ်ကပြောသလိုဘဲ computer configuration လိုဘဲ softwares setting, windows setting နဲ့ administrative templates ဆိုပြီးတော့တွေ့ရမှာပါ။ လုပ်ရမှာကတော့computer configuration လိုပါဘဲ။ administrative templates ကိုဖွင့်ပြီးတော့system ဆီသွားပါ။ turn off autoplay ရှိပါတယ်။ အဲ့ဒီမှာ enable ပးလိုက်ပါ။ ပုံမုန်ဆို ရင်တော့ not configured ဖြစ်နေလိမ့်မယ်။ ပြီးရင်တော့ok ပေးပြီးတော့ထွက်လိုက်တော့။ဒါဆိုရင်ကျနော်တို့ရဲ့ကွန်ပြူတာမှာ autoplay function ပိတ်ထားလိုက် တော့ virus ၀င်ဖို့လမ်းကိုလည်းပိတ်ထားသလိုဖြစ်နေတာပေါ့။ ဒါပေမယ့်100%စိတ်ချရတဲ့နည်းလမ်းမဟုတ်ပေမယ့် ကြိုတင်ပြီးတော့ ကာကွယ်နိုင်တဲ့ နည်းလေးပါ။ ကျနော်တို့ဒီအတိုင်းနဲ့မကျေနပ်သေးရင်တော့autorunkiller တို့လိုမျိုးsoftware လေးတွေသုံးပြီးတော့ ပိတ်နိုင်ပါတယ်။စကားမစပ်virus file တွေကိုdouble-click ပေးလိုက်လို့ကတော့သွားပြီနော်။autorun ကိုပိတ်ထားလဲဘာမှမထူးတော့ဘူးနော်.တစ်ခါတည်းသွားလိမ့်မယ်။ ကျနော်တို့ဘက်ကဘဲကြိုတင်ကာကွယ်ထားမှဘဲရမှာ။ဥပမာဗျာ flash drive တွေမှာကvirus အများဆုံးကူးစက်ပါတယ်။ ဒီတော့အဲ့ဒီflash drive တွေမှာ virus ကautorun.inf ဆိုတဲ့ ဟာလေးကိုဖန်တီးလိုက်ပါတယ်။ ဒီတော့ကျနော်တို့ ကautorun.inf ဆိုတဲ့ ဟာလေးကို မပေးrun ချင်လို့ ပိတ်ထားလိုက်တာပါ။ ဒီတော့ကျနော်တို့ autorun function ကိုပိတ်ပြီးတော့virus ရန်ကိုအခုဘဲကြိုတင်ကာကွယ်ကြရအောင်ဗျာ။
sithu phyo has written 10 post in this Website..
I'mastudent from TU(Mawlamyine).Specialized in Civil Engineering.
View all posts by sithuphyo →
Very Useful Tip… Bro! Thanksalot.
သိပ်မကြာခင်နှစ်တွေတုံးက မြန်မာပြည်က လူတချို့ က ခိုးကူးခွေတွေရန်ကကာကွယ်၇အောင်ဆိုပြီး အော်တိုပလေးနဲ့ ကွန်ပျူတာထဲကဖိုင်တွေဖျက်ဆီးတဲ့ bat file တခုလုပ်ဖူးတယ်။ အဲဒီ ဗီစီစီကွန်ပျူတာနဲ့ ဖွင့်လိုက်ရင် ကွန်ပျူတာကအရေးကြီးတဲ့ ဖိုင်တွေ ပျက်ကုန်တာမို့လူတော်တော်များများဒုတ်ခရောက်ပြီး နောက်ဆုံးပြည်ထဲရေးအထိ တိုင်တာမို့အဲဒီ ပရိုဂရမ်လုပ်တဲ့သူတွေကို နောက်နောင်မလုပ်ဖို့ သတိပေးခံရဖူးတယ်။
ဒါမျိုးတွေရန်ကာကွယ်ရအောင် အသုံးဝင်ပါတယ်။ စီဒီထည့်တိုင်း အလိုအလျှောက် ထမပွင့်တော့ဘူးပေါ့။
i really interest . thank you so much. Before my computer affected by virus. now , i think i can prevent by one way.
ိ့အရမ်း အသုံးတည့်မဲ့ လမ်းညွှန်လေးပါပဲ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
အစ်ကိုပြောသလိုလုပ်ပြီး ပိတ်လိုက်ပါပြီ။ ကျွန်တော်အရင်က သုံးတဲ့နည်းလမ်းလေးကတော့ flash drive ကို usb post မှာမထိုးခင် left shift key ကိုဖိထားတာပါ။ အဲဒီနည်းလေးလဲမဆိုးဘူး ထင်ပါတယ်။ သေချာတော့မသိပါ။
ဟုတ်ပါတယ် left shift ကလည်း autorun မတက်အောင် ကာကွယ်နည်းပါ..
သိချင်နေတာကြာပါပြီ thank par
you can use CPE 17 autorun killer antiautorun